8 Zvino pazvinhu zviri kutaurwa, shoko guru ndeiri: Tine mupristi mukuru+ akaita souyu, uye akagara kurudyi rwechigaro choumambo chaChangamire kumatenga,+
2 ari mushumiri womunzvimbo tsvene+ anoshandira vanhu vose uye womutende rechokwadi, rakamiswa naJehovha,+ kwete munhu.+
3 Nokuti mupristi mukuru wose anogadzwa kuti ape zvipo nezvibayiro;+ saka zvakanga zvakakodzera kuti uyuwo ave nechimwe chinhu chokupa.+
4 Zvino, kudai akanga ari panyika, aisazova mupristi,+ zvapaiva nevanhu vaipa zvipo maererano noMutemo,
5 asi vari vanhu vanoita basa dzvene riri mumufananidzo chaiwo+ uye mumvuri+ wezvinhu zvokudenga; sokupiwa murayiro kwakaitwa Mosesi naMwari+ paakanga ava kuda kugadzira tende rose:+ Nokuti iye anoti: “Ona kuti unogadzira zvinhu zvose maererano nomufananidzo wazvo wawakaratidzwa mugomo.”+
6 Asi zvino Jesu akawana basa rinoitirwa vanhu vose rakatonyanya kunaka, zvokuti ndiyewo murevereri+ wesungano yakafanana iri nani,+ yakasimbiswa zviri pamutemo pazvipikirwa+ zviri nani.
7 Nokuti kudai sungano yokutanga iyoyo yakanga isina mhosva, pangadai pasina kutsvakwa nzvimbo nokuda kweyechipiri;+
8 nokuti iye anowanira vanhu mhosva paanoti: “‘Tarirai! Mazuva achauya,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘andichaita sungano itsva+ neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha;
9 isina kufanana nesungano+ yandakaita nemadzitateguru avo pazuva randakabata maoko avo kuti ndivabudise munyika yeIjipiti,+ nokuti havana kuramba vari musungano yangu,+ zvokuti ndakabva ndarega kuvatarisira,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.”+
10 “‘Nokuti iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri pashure pemazuva iwayo,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Ndichaisa mitemo yangu mupfungwa dzavo, uye ndichainyora mumwoyo mavo.+ Ndichava Mwari wavo,+ uye ivo vachava vanhu vangu.+
11 “‘Mumwe nomumwe haangazombodzidzisi wokwake uye mumwe nomumwe hama yake, achiti: “Ziva Jehovha!”+ Nokuti vose vachandiziva,+ kubvira kumuduku wavo kusvikira kumukuru wavo.
12 Nokuti ndichanzwira ngoni mabasa avo asina kururama, uye handizomboyeukizve+ zvivi+ zvavo.’”
13 Paanotaura kuti “sungano itsva” iye aita kuti yekare isashanda.+ Zvino chinoitwa kuti chisashanda uye chiri kusakara chava kuda kutsakatika.+